hanbalyo iyo tageero ku socota musharax golaha degaanka xusbiga kulmiye ee hargaisa axmed siyaad muxumed by KAYSE S. MOHAMED ( GIIRE (Hadhwanaagnews) Saturday, June 09, 2012 waxan salamaayaa dhamaan bahweynta saxafada somaliland iyo shacab weyna guud ahaan waxan salamaayaa dhamaan bahweynta saxafada somaliland iyo shacab weyna guud ahaan iyo gaar ahaan reer hargeisa oo ah magalada madaxda caasimada jam somaliland waxan hanbalyo iyo bogaadin halka ugu diyaara musharaxa golaha degaanka gobollka maroodi jeex ee xusbiga kulmiye mudane Axmed siyaad muxumed oo ah mudeni ugu horeyey ee iska soo sharaxa xusbul xaakimka.
waxan aad u soo dhawaynaa musharaxa da´da yar ee iska soo sharaxey xusbul xaakima ee taagan hormar iyo waxqabad la taaban karo oo ku soo kordhin doono reer somalilland guud ahan iyo gaar ahaan reer maroodi-jeex oo ha muraayda laga dheehdo hormarka iyo barwaaqada dalkeen. musharaxan oo ah mudane khibrad badan u leh
arrimaha degaanka iyo qurxinta magaalantaynt in badana ku dhex jirey hawalaha dawlada hoose iyo saxada siyaasada somaliland, isagoo ah tiirka ka mid aha tiraarki guusha xusbul xaakimku gaadhey doorashaduu ugu danbeysey ka dhacda wadankeen ee kulmiye ku hantey kursiga madaxtooyda.
waxan aad ugu kalsoonahay in uu waxa badan ka tiri doono milicda iyo ku soo hirashada caasimada somaliland oo u baahan in waxa badan laga qabto hada.
waxa kale oo hormood u yahay dhalinta da´dad yar ee jecel in ay ku soo biraan saxada siyaasada somaliland ee raba in ay waxa badan ka badaalan qaab siyasaasadedka somaliland.
mudane axmed siyaad muxumed waa halyey waxyaabo kale duwan u soo qabtey reer maroodi jeex hadana rabaa in u gaadhsiyo lana tartan siiyo caasimada wadama hormareymagalo madaxyadooda; caasimada hargaisa, si ay noqoto caasimada ka tilaaman wadama geeska afrca iyo dunida inteeda kale. hadaba muwaadin tageeer musharaxa da´da yar ee u tagaan golaha degaanka hargaisa oo ku garab istaag hormarka magalada iyo caasimada somaliland
W/q KAYSE S. MOHAMED ( GIIRE) MA: DEVELOPMENT ECONOMICS
ADDIS- ABABA ETHIOPIA